के मोदीका माहिलो भाई टेम्पो चलाउछन् ? हेर्नुस् रहस्य | Automotive News Nepal
के मोदीका माहिलो भाई टेम्पो चलाउछन् ? हेर्नुस् रहस्य ८ असोज, २०७५
सोसल मिडियामा आजकाल एक तस्बिर निकै नै भाइरल बनिरहेको छ । सो तस्बिर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको माहिलो भाइको भएको र उनले टेम्पो चलाएर परिवार पालिरहेको बताइएको छ ।
मोदी कति सम्म इमान्दार छन् भने आफ्नो परिवारलाई पनि आफ्नो पदमार्फत फाइदा लुट्न दिदैनन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ ।
सो तस्बिर श्यामनारायण शर्माले फेसबुकमा तस्बिर सहित पोस्ट गरेका थिए । यसमा भनिएको छ, ‘मोदीजीका माहिला भाई टेम्पो चलाएर परिवार पालिरहेका छन् र यहाँ अन्य विधायकका परिवार भने एसी गाडीमा इन्जोय गरिरहेका छन् ।’
सो पोस्ट यति भाइरल बन्यो कि केही समयमै सयौंले लाइक गरे र हजारौले सेयर गरे । तस्बिरमा मोदी जस्तै देखिने ब्यक्ति टेम्पोमा बसेका छन् । सो तस्बिर अन्य धेरैले पनि सेयर गरेका छन् ।
यद्यपि सो तस्बिर मोदीका भाइको नभएको तथ्य पछि पत्ता लागेको छ । यस सम्बन्धी जानकारी सन् २०१६ मै फोर्थ डट इन नामक साइटमा प्रकाशित भइसकेको छ । उनी अदिलावादस्थित अटो ड्राइभर भएको र उनी हेर्दा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जस्तै देखिने समाचार त्यति बेलै सार्वजनिक भइसकेको थियो ।
अदिलावाद भारतको तेलंगना राज्यमा पर्छ । उनको नाम शेख अयुव हो । उनले पहिले आरटीसी बस चलाउथे । उनले हाल टेम्पो चलाउन थालेका हुन् । मोदी जस्तै देखिने भएकाले उनी सो क्षेत्रमा चर्चित छन् ।
कोटेश्वरमा किन हुन्छ सधैं जाम ?
काठमाडौं - राजधानी काठमाडौं प्रवेशको एउटा प्रमुख नाका कोटेश्वरमा दिनहुँ बिहान बे...
अमेरिकामा चालक अनुमति–पत्रको परीक्षा : कसरी लिन सकिन्छ ? के छ व्यवस्था ?
अमेरिकामा चालक अनुमति–पत्रको परीक्षा शिर्षक लेख्दा अलि बृहत् हुन्छ । यस वि...
टीभीएसको क्रुजर बाइक लन्च हुँदै, रोयल इन्फिल्ड थन्डरबर्डसँग प्रतिस्पर्धा हुने
टीभीएसले भारतमा चाँडै क्रुजर बाइक लन्च गर्ने भएको छ । टीभीएसले ज्यापलिन २१२ सीस...